OS X El Capitan တွင် Split View ကိုမည်သို့သုံးရမည်နည်း ငါက Mac ကပါ
OS X El Capitan တွင် Split View ကိုမည်သို့သုံးရမည်နည်း
၏မကြာသေးမီရောက်ရှိနှင့်အတူ OS X အယ်လ် CapitanMac သုံးစွဲသူများသည် application များကို full screen နှင့်aတွင်အသုံးချနိုင်သည် မျက်နှာပြင်နှစ်ခုခွဲ။ ဆိုလိုသည်မှာမည်သည့်သက်ဆိုင်သည့် application မဆိုကျွန်ုပ်တို့သည်ဒုတိယအက်ပ်တစ်ခုနှင့်အတူတူလုပ်ဆောင်နေစဉ်မျက်နှာပြင်တစ်ဝက်လုံးကိုသိမ်းပိုက်နိုင်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် application နှစ်ခုနှင့်တစ်ပြိုင်နက်အလုပ်လုပ်နိုင်ပြီးတစ်ဝက်တွင်အပြည့်အဝလည်ပတ်နိုင်သည်။
ယင်းကိုအသုံးပြုဖို့ မျက်နှာပြင်အပြည့်၊ split Split View o Split ကြည့်ရန် de OS X အယ်လ် Capitan ၎င်းသည်အလွန်ရိုးရှင်းသည်၊ သို့သော်အချို့သောရှုထောင့်များကိုသိရန်လိုအပ်သည်။ အထူးသဖြင့်အစတွင်မပါဝင်ရန်။
ကိုသက်ဝင်စေဖို့ အဆိုပါအမြင်အမြင် လိုက်လျောညီထွေရှိတဲ့ app တစ်ခု၏ ၀ င်းဒိုးရှိအစိမ်းရောင်ခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့ခဏလေးကိုနှိပ်ပြီးကိုင်ထားပါ။ ထိုအချိန်တွင်မျက်နှာပြင်၏ထက်ဝက်သည်အပြာနုရောင်ဖြစ်နေပုံကိုသင်မြင်ရလိမ့်မည်။ သင်လိုချင်သည့်နေရာတစ်ဝက်တွင်ပြတင်းပေါက်ကိုသာဖယ်ရှားပစ်ရလိမ့်မည်။
အလိုအလျောက်၊ မျက်နှာပြင်၏အခြားတစ်ဝက်သည်သင်ဖွင့်ထားသော application များကိုပြလိမ့်မည်။ အက်ပ်များအားလုံးကိုထောက်ပံ့မထားပါ၊ သို့သော်၎င်းသည်နောက်မှမဟုတ်ဘဲစောလျင်စွာဖြစ်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။ အကယ်၍ သင်ကသူတို့ကိုရယူရန်ကြိုးစားပါကဤအက်ပ်တွင်မရရှိနိုင်ကြောင်းအသိပေးချက်တစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မည် အမြင်ကွဲ.
အခြားမျက်နှာပြင်တစ်ဝက်တွင်ကျန်ခဲ့သည့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်သောအက်ပ်များထဲမှတစ်ခုကို နှိပ်၍ ၎င်းအရွယ်အစားသည်မျက်နှာပြင်အပြည့်၏တစ်ဝက်အလိုအလျောက်ညှိပေးလိမ့်မည်
ဘာကိုသိနိုင်မှာလဲ applications များ နှင့်သဟဇာတဖြစ်ကြသည် Split View (သို့) Split View အဘယ်သူသည်မဟုတ်လော။ ရိုးရှင်းသော။ cursor ကိုအစိမ်းရောင်ခလုတ်ပေါ်တွင်နေရာချသောအခါ, အကယ်၍ မြှားနှစ်ကောင်သည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုဆန့်ကျင်ဘက်ပေါ်လာပါက၎င်းသည်လိုက်ဖက်သည်ဟုဆိုလိုသည်; ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့် "+" သင်္ကေတပေါ်လာပါကသင်စိတ်ကူးနိုင်သည်။
အဆိုပါ အကယ်. အမြင်ခွဲသို့မဟုတ်အမြင်ခွဲ သင်၏ Mac တွင်အလုပ်လုပ်ခြင်းမရှိပါ၊ System Preferences တွင်၎င်းကိုသင်ဖွင့်ရန်လိုကောင်းလိုလိမ့်မည်။ မျက်နှာပြင်၏ဘယ်ဘက်အပေါ်ထောင့်ရှိပန်းသီးအိုင်ကွန်ကို နှိပ်၍ System Preferences ကိုရွေးချယ်ပါ။ Mission Control ကိုနှိပ်ပါ။ ထို့နောက် "Screenss သီးခြားနေရာများရှိသည်" ကိုရွေးချယ်ပါ။ ပြောင်းလဲမှုများကိုအသစ်ပြောင်းရန်သင်၏ကွန်ပျူတာကိုပြန်လည်စတင်ရန်လိုကောင်းလိုလိမ့်မည်။
mode ကို အမြင်ကွဲ ဆိုလိုသည်မှာသင့်အနေဖြင့်ဖန်သားပြင်၏ ၅၀% အတိအကျကိုရယူထားသော application နှစ်ခုရှိသည်ဟုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ၊ ဒေါင်လိုက်မျဉ်းကိုဘယ်ဘက်သို့ညာသို့ဆွဲခြင်းဖြင့်ချိန်ညှိနိုင်သည်။
သငျသညျကိုလည်း activate နိုင်ပါတယ် အမြင်ခွဲသို့မဟုတ်အမြင်ခွဲ မျက်နှာပြင်အပြည့်အက်ပ်တစ်ခုတည်းကိုသင်အသုံးပြုပြီးပါက။ သင်၏ကီးဘုတ်ပေါ်ရှိ F3 ကိုနှိပ်ခြင်းသို့မဟုတ်သင်၏လက်ချောင်းလေးချောင်းကိုဆွဲခြင်းဖြင့် Access Mission ကိုနှိပ်ပါ trackpad။ «သင်စိတ်ဝင်စားသည့်အက်ပ်ကိုယူပြီး၎င်းကိုမျက်နှာပြင်ထိပ်၊ multitasking toရိယာသို့ဆွဲယူပြီးသင်မျက်နှာပြင်အပြည့်တွင်ဖွင့်ထားသောအက်ပ်တည်ရှိရာနေရာတွင်၎င်းကိုဖယ်ရှားပါ။
လျှောက်လွှာတစ်ခုစီ၏မီနူးဘားကို mode တွင်ရှာရန် အမြင်ခွဲသို့မဟုတ်အမြင်ခွဲ, ဘေးထွက်ရွေးပါ, ပြီးတော့မျက်နှာပြင်၏ထိပ်ကျော်ပျံဝဲ။ မီနူးဘားပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
သင် mode ကိုမှထွက်ချင်တဲ့အခါ အမြင်ခွဲနောက်တဖန်အစိမ်းရောင်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီး application သည်ယခင်အရွယ်အစားသို့ကျသွားပြီးကျန် application ကို full screen သို့ချဲ့လိုက်သည်။ ESC key ကိုလည်းသင်နှိပ်နိုင်သည်။
mode ကိုအတူ OS X El Capitan တွင်မြင်ကွင်းကျယ်သင်၏ Mac မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိနေရာများကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာအသုံးချစဉ်သင်၏ကုန်ထုတ်စွမ်းအားသည်များပြားလာလိမ့်မည်။ ဤစာမူကို function အသစ်ဖြင့်ရေးသားပြီး၎င်းသည်သက်တောင့်သက်သာရှိမှုနှင့်အချိန်ကုန်သက်သာခြင်းရှိကြောင်းသင့်ကိုအာမခံသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple » လဲ tutorial » OS X El Capitan တွင် Split View ကိုမည်သို့သုံးရမည်နည်း
ပြီးခဲ့သည့်သုံးလပတ်တွင် Mac ရောင်းချမှုသည် ၄ ​​ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်ခဲ့သည်